သူ့ကျတော့ ... တူးတီးတူတူး​တူး... ~ ITmanHOME
10:01 ဟာသ No comments
သူ့ကျတော့ ... တူးတီးတူတူး​တူး...
သူဌေးကတော်ကို ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်မှုလုပ်သည်။ ပိုနေသော အဆီများကို ထုတ်ပစ်သည်။ နှာခေါင်းပုံသဏ္ဌာန်ကို ပြောင်းပေးသည်။
ခွဲစိတ်မှုပြီးသောအခါ မှန်ထဲ မိမိကိုယ်မိမိ ကြည့်ရင်း သူဌေးကတော်က ပြောသည်။
"ခွဲစိတ်မှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကျေနပ်ပါတယ်၊ မျက်လုံးတစ်ခုပဲ…."
"သြော် ကျွန်မရဲ့ မျက်လုံးကို နည်းနည်းချဲ့ပေးလိုက်ရင်များ ပိုကောင်းသွားမလားလို့ပါ"
"ဒီအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ခွဲစိတ်ခဘောက်ချာကို မြင်တဲ့အခါမှာ အစ်မကြီးရဲ့ မျက်လုံးတွေ အလိုလို ကျယ်လာပါလိမ့်မယ်"
စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ဂျင်မီ ရဲ့ ဆေးခန်းကို အမျိုးသမီး တစ်ယောက် သူ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အခြေအနေကို လာတိုင်ပင်ပါတယ်။
"ကျွန်မ ယောက်ျားအတွက် ကုသဖို့ နည်းလမ်းရှိပါ့မလား ဆရာရယ်။ ရူးများ ရူးသွားပြီလားမသိဘူး။သူ့ကိုယ်သူ ရေခဲသေတ္တာလို့ ထင်နေတယ် ဆရာရဲ့"လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဂျင်မီက "ဒီလောက်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာ။ ခုချိန်က လူတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတော့ ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်"လို့ဆိုတော့ အမျိုးသမီးက စိတ်သက်သာပုံမရဘဲ ဒီလိုထပ်ဆိုပါတယ်။
"ဆရာသူ့ကို နားမလည်ပါဘူး။ သူက ပါးစပ်ကြီးဟပြီး အိပ်တော့ သူ့ထဲက ရေခဲသေတ္တာမီးကလင်းနေတာ ကျွန်မ ဘယ်အိပ်ပျော်ပါ့မလဲ.."
yuu tar ka Thu par pal :P
ချူချာလူမျိုးတယောက်က အင်္ဂလန်ကိုသွားလည်တယ်..ဟိုတယ် မှာတည်းတယ်..သူက receptionistကိုပြောတယ်..
receptionistနားမလည်ဘူး..ဒါနဲ့ စပိန်ဘာသာပြန်ကိုခေါ်မေးတယ်..စပိန်ဘာသာပြန်က မေးတယ်..
စပိန်ဘာသာပြန်နားမလည်ဘူး..ဒါနဲ့ ပြင်သစ်ဘာသာပြန်ေ၇ာက်လာတယ်..မေးတယ်..ချူချာ ကလဲ ပြန်ပြောတယ်..
ပြင်သစ်လဲ နားမလည်ဘူး..စကားပြန်တွေတော်တော်စုံသွားတယ်..ဘယ်သူမှ နားမလည်ဘူး.. နောက်ဆုံးဟိုတယ် မန်နေဂျာေ၇ာက်လာတယ်..မေးတယ်..
မန်နေဂျာ စဉ်းစားတ.ယ်..ပြီးတော့မှ ၀မ်းသာအား၇ ထပြောတယ်..
`အော်..သူကပြောတယ်...လက်ဖက်၇ည်နှစ်ခွက် အခန်းနံပါတ် ၂၂ ကိုလာပို့ပေးပါတဲ့´
ဆေး၇ုံ တစ်ခုထဲကို လူနာတယောက်ေ၇ာက်လာတယ်..သူနာပြုကမေးတယ်..
.တိန် -!!! :/
( D lo Hospital tway myarr nay p naw :( )